ဝင်းအောင်, လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖွား. ဦးဝင်းအော
ⓘ ဝင်းအောင်, လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖွား. ဦးဝင်းအောင် သည် မြန်မာလူမျိုး နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မိုးမောက်မြို့နယ ..
ဝင်းအောင် အမည်ရှိ မြန်မာလူပုဂ္ဂိုလ်များမှာ - ဝင်းအောင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖွား - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် တင်ဝင်းအောင် ဘောလုံးသမား ဝင်းအောင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ဖွား - အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၃ ဟန်ဝင်းအောင် ဘောလုံးသမား ဝင်းအောင် ဝန်ကြီး - ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၊ တပ်မတော်အရာရှိ ရဲဝင်းအောင် ဘောလုံးသမား ဝင်းအောင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၅၈ ခုနှစ်ဖွား - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်
ⓘ ဝင်းအောင် (လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖွား)
ဦးဝင်းအောင်ကို ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည် မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံဘွဲ့ သတ္တဗေဒ ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ကျူရှင်ဆရာအဖြစ် အသက်မွေးခဲ့သည်။
Wikipedia: ဝင်းအောင် (လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်ဖွား)